Asandrato ny Tompo, ry fanahiko - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Asandrato ny Tompo, ry fanahiko
I Maria, renin’i Jesosy, dia mbola tsy nahalala na inona na inona momba ny solomaso fanandratana. Fantany anefa hoe inona no ao amin’i Lioka 1,46 hoy izy rehefa nahatsapa ny fiderana nipoitra tao anatiny tamin’ny vaovao fa hahazo ny fitahiana ho renin’ny Mesia izy. "Ary hoy Maria: Ny fanahiko mankalaza ny Tompo." Ny teny grika nadika hoe “manandratra” dia midika hoe manao lehibe sy manandratra, ary avy eo, amin’ny heviny midadasika kokoa, dia manandratra, mankalaza, midera, midera, manitatra. Hoy ny fanehoan-kevitra iray: “Manandratra ny Tompo i Maria amin’ny filazana amin’ny olona ny fahasandrany sy ny fisandratany eo imason’izy ireo. Miaraka amin’ilay andian-teny (amin’ny teny grika) i Maria dia manondro fa ny fiderana an’Andriamanitra dia avy amin’ny fony lalina indrindra. Tena manokana ny fanompoanao; avy amin’ny fo izany. Ny hira fiderana an'i Maria dia antsoina hoe "Magnificat", izay teny latina hoe "manangana, manitatra". Nilaza i Maria fa manandratra ny Tompo ny fanahiny. Ny fandikan-teny hafa dia mampiasa ny teny hoe "midera, manandratra, manome voninahitra".
Ahoana no ahafahanao manangana ny Tompo? Angamba ny lexicon dia manome antsika teboka sasany. Ny zava-dehibe iray dia ny hahatonga azy ho lehibe kokoa habeny. Raha manandratra ny Tompo isika dia hihalehibe kokoa. Hoy i JB Philipps: "Kely ny andriamanitrareo." Ny fananganana sy ny fisandratana ny Tompo dia manampy antsika sy ny hafa hahatakatra ny halavany lavitra noho ny noheverintsika na noeritreretintsika.
Hoy i Joe Stowell, "Ny tanjon'ny fianarantsika dia ny hampahafantatra ny hafa ny toetran'Andriamanitra eo am-pijereny sy hizarany ny fitiavany amin'ny alalantsika." Azonao atao ny milaza fa ny fiainantsika dia toy ny varavarankely izay ahitan'ny olona hafa an'i Kristy mipetraka ao amintsika. Ny hafa nampiasa ny fampitahana fa isika dia toa fitaratra taratra izay maneho azy sy ny fitiavany. Azontsika atao ny manampy amin'ny lisitra hoe fitaratra lehibe isika. Rehefa miaina isika, ny toetrany, ny sitrapony, ary ny fomba ahafahan'ny mpihaino ho mazava kokoa sy lehibe kokoa.
Raha mitondra fiainana tony sy mangina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny voninahitra rehetra isika (1. Timoty 2,2) tokony hitandrina ny varavarankelin’ny fahadiovana isika, haneho fisaintsainana mazava, ary hanandratra ny fiainana sy ny fitiavan’i Jesosy ao anatintsika. Asandrato ny Tompo, ry fanahiko!